Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:33 PM
ဟိုက် .. တို့နာမည်ပါ ဆွဲထည့်ထားတာပါလားး) အဟီ ..
နှင်းပွင့်တဲ့..... နာ့နဲ့ နာမည် ၂ လုံးတောင် လာတူနေတယ် ...
ဟားဟား ........ ရီရ တယ်... ဆက်ရန်ရှိအုံးမယ်ပေါ့ ..
မကြာမီ လာမည် ကြာမယ်.. မျှော် .......... ဟဲဟဲ
အဟတ်ဟတ် တယ်တော်တဲ့ နာ အဲလေ တယ်တော်တဲ့ ကိုဆိုးသွမ်းပါလား။ အားလုံးပါအောင်ရေးတတ်ပါ့။ ရီရတယ် ဆက်လုပ်....
I don't want to write comments this night, because this story hasn't about me.But whatever I would like to say that ,this story it isafunny. But I would like to know about that one , did you had seen the leg of စူဠသုဘဒွ ????? if u has seen , did u take photo? :P :P :)နောက်ပြီးတခုမေးချင်စေးတယ်.။ မရှင်းလို့ ပါနော်..။ အဒီထဲမှာ ဆိုးသွမ်းအော်လိုက်တာ "ဂိန်" လို့ အော်လိုက်သံကြားမိသလားလို့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းပါတယ် (စိတ်ညစ်ဖို့ )
ဟားဟား ... တော်သေးတာပေါ့ဗျာ ... ကဲ ကိုဆိုးသွမ်းနဲ့ တွေ့ရင်တော့လားး :P
ဟဲ့....သောက်ပလုတ်တုပ် ဟီး လန့်လိုက်တာ
တွေ့ရင်တော့ ကြိုပြီး ခြေသလုံးဖက် တောင်းပန်ရမှာပဲ
နားမလည်တော့ဘူး ဒါပေမယ့်ရယ်ရတယ် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဒီလိုပယ်ပယ်နည်နည် ပြောတဲ့လူ ဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဖူးသေးတယ် အရမ်းရယ်ရတယ်
ဘယ်သူကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး ဗျ။
ကြားရင် အသက်ခံရတော့မယ်။ မနှင်းသဇင်ရေ။
နစ်နာရင် နစ်နာပါစေ။ အထင်ခံရလည်း မနည်းဘူး
ရယ်လိုက်ရတာကိုဆိုးသွမ်းရယ်။ ဆက်ရန်ရှိသေးတယ်ပေါ့။ မျှော်နေမယ်နော်။
အမယ် တူညားကိုများ
နက်ဖြန်မှ မရရင် ဂိန်လို့အပီအော်သွားရအောင်
တိန်လို့ တုတ်နဲ့ ခုတ်မှာနော်